Ụlọ Omebe Iwu Anambra Abàgide Ịmàchì Oke Mmefù Ego N'akwamozu
Ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra ewepùtela ma kwàdo atụmatụ iwu ọhụụ megidere oke mmefù oke ego a na-emefùkarị na mmemme akwamozu na steeti ahụ. Atụmatụ iwu a bụ nke e nyèrè kwàdo n'ọgbakọ ndị ụlọ omebe iwu ahụ nwere ụbọchị tuuzdee n'ogige ha dị n'Awka, ma bụrụkwa nke a tụpụtara site n'aka onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Anaọcha nke abụọ na ya bụ ụlọ.
Na nkọwa, ya bụ atụmatụ iwu bụ nke ebumnobi ya bụ iji wee bèlata oke mmefù ego nke ọtụtụ ndị mmadụ na-emefù na nchịkọba mmemme akwamozu na ya bụ steeti. Dịka ya bụ atụmatụ iwu ahụ gàrà n'ihu kọwaa, o nweghịzị onye ọbụla ga-adọba ozu n'ụlọ nchekwa ozu na steeti ahụ ma hapụgide ya karịa ọnwa abụọ, ebe mmemme akwamozu ga na-abụzị naanị otù ụbọchị.
Ọzọkwa, ya bụ atụmatụ iwu mègidere mà màchíé ịgba mkpọala, imebisi ihe na ịbụ abụ òtùtó n'akwamozu, tinyéré igbóchìsì ma ọ bụ dochisie ihe n'okporo ụzọ ma e mebe mmemme akwamozu, ma kwuo na onye ọbụla nupùrù isi na nke ahụ, bido n'ụbọchị ọ màlitere dịba ìrè, ga-enweta ntaramahụhụ ga-ejezu ya àhụ. Iwu ahụ kwuru na ọ bụ ndị na-akwa ozu ga-ekpebì ma hàziere ndị bịaara ha mgbárú ihe oriri na ọñụñụ dịka o sìrì masị ha, ma ọ bụ dịka ike ha rà; ma kwukwazie na ọ nweghị onye ọbụla a ga-eme ka ọ nọrọ n'ọnọdụ iru uju karịa otu izu ụka, na-agbànyeghị ihe onye ahụ bụụrụ onye nwụrụ anwụ, ma ọ bụ otu ya na ya siri dị.
N'okwu ya bànyere iwu ahụ, maazị Ezeana, bụ onye tụpụtara ya bụ atụmatụ iwu kọwara ya dịka nke dị óké mkpà, n'ilekwàsị anya n'ụdị ego ndị mmadụ na-emefùzị ugbu a na steeti ahụ n'oge mmemme akwamozu, ma sịkwa na atụmatụ iwu ahụ guzòbekwara òtù ga-eleru anya nke ọma ịhụ na e tinyere ihe ndị ahụ niile n'ọrụ ma mezùpùtachaakwa ha niile.
N'okwu nkè ya, ọka okwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ, bụ oriakụ Rita Madụagwụ kèlèrè ndị omebe iwu ahụ maka ịkwàdò ya bụ atụmatụ iwu dịka nke magburu onwe ya, ma kwukwazie na a ga-agbasi mbọ ike ịhụ na e mezùpùtara ya n'ozuzo òkè.